» Video & Sawiro: Xasan sh, & Farmaajo oo Maanta Caalamka ka yaabsaday iyagoo Tusay Wajiga Cusub ee Somalia….Badweyntimes.com
Video & Sawiro: Xasan sh, & Farmaajo oo Maanta Caalamka ka yaabsaday iyagoo Tusay Wajiga Cusub ee Somalia….
Feb 16, 2017 - jawaab
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah xilka ugala wareegay madaxweynihii hore Xasan Shiikh Maxamuud.
Waxaa xilwerejinta lagu bilaabay kulan dhexmaray labada masuul ee isbedelaya, waxay isku wareejiyeen xogo iyo ducoments la xiriira heshiisyada , mashaariicda socda, balamaha iyo xogo shaqo.
HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA
Farmaajo iyo Xasan kadib waxay wada booqdeen hantida qaran ee lagusoo helay magaca Madaxweynaha Soomaaliya oo isugu jirta Dahab, dheeman , luul iyo waxyaabo kale oo qaali ah , Madaxweynihi hore Xasan shiikh ayaa alaabtan oo ay ku jirto seefta dahabka ee caanka noqotay ku wareejiyay Madaxweynaha Cusub Farmaajo.
Kadib waxay wadajir ula hadleen Weriyayaasha , Xasan shiikh oo ay u ahayd maalintii ugu danbeeyay xafiiska uu joogay 4sano, waxaa uu sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in uu xilka ku wareejiyo Madaxweynaha cusub Farmaajo.
Dhiniciisa Madaxweynaha Cusub Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo isna hadlay markiisa waxaa aad u amaanay sida wanaagsan ee uu maanta xilka ula wareegay, isagoo u mahadceliyay madaxweynihii ka horeeyay.
Labada masuul ayaa soo wada socday iyagoo ku dul lugeynaya roog gaduudan ayeey yimaadeen barxada madaxtooyada halkaasi oo ay ciidamada Bambay-da Salaan ciidan ku sagootiyeen Madaxweynihii hore Xasan Shiikh Maxamuud kuna soo dhoweeyeen madaxweynaha cusub.
« Warbixinta Ka HoreysayDhageyso: Xil Wareejinta kadib Farmaajo oo ku dhawaaqay Hadal Shacabka ka farxiyay aadna loo sugayay…
Warbixinta Xigto »Dhageyso: Farmaajo oo khudbad Qiiro leh ka jeediyay Xaflada Xil Wareejinta iyo Arin aad loo hadal hayay oo…